Best NR ntụ ntụ (23111-00-4) Onye na-emepụta China & ụlọ ọrụ
NR ntụ ntụ (23111-00-4)
Cofttek bụ onye kacha emepụta Nicotinamide Riboside Chloride ntụ ntụ na China. Ụlọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke (ISO9001 & ISO14001), yana ikike mmepụta kwa ọnwa nke 2100kg.
NR ntụ ntụ (23111-00-4) vidiyo
Nicotinamide Riboside Chloride (NR) Ihe Smmezi
aha: Nicotinamide Riboside Chloride (NR) Ihe
Usoro Molecular: C11H15ClN2O5
Molekụla arọ: 290.7 g / mol
Aha aha: 3-carbamoyl-1-((3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride
Synonyms: Nicotinamide riboside; SRT647; SRT-647; SRT 647; Nicotinamide Riboside Triflate, ngwakọta α / β
Ọkara ndụ: 2.7 awa
ngwa: A na-ekwu na Nicotinamide riboside bụ ụdị ọhụụ nke pyridine-nucleoside nke vitamin B nke na-arụ ọrụ dị ka ihe ga - enyere aka nicotinamide adenine dinucleotide ma ọ bụ NAD +.
anya: Gbanyụọ White ka icha mmirimmiri edo edo
Ahụ mmadụ bụ usoro dị mgbagwoju anya nke mejupụtara sel, anụ ahụ, yana sistem akụkụ ahụ. Chemicals dị iche iche, enzymes na nri na -edozi ma na -enyere aka ịrụ ọrụ nke ọma na sel na anụ ahụ n'ime ahụ. Ụfọdụ n'ime ahụ ndị a nwere ike imere onwe ha, ebe ụfọdụ ga -eripịa ya. N'ihi ya, nri ndị a dị n'ụdị nri na mgbakwunye. Otu n'ime ihe ndị a nwere ike inye aka gwọọ ma mezie ahụ ka akpọrọ nicotinamide riboside chloride (NR). Ọ na -enyere aka ịbawanye ọnụọgụ nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) n'ime ahụ.
Kedu ihe Nicotinamide Riboside Chloride na -eme?
Nicotinamide Riboside Chloride, nke a na -akpọkwa NR, bụ pyridine nucleoside nke vitamin B3. Ọ na -arụ ọrụ dị ka onye mbido maka nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). Ọ dị dị ka nke na-achaghị ọcha ka ntụ ntụ na-acha odo odo na-acha odo odo. Ọ bụ otu n'ime ihe ọmụmụ NAD+ kacha amụ nke ọma ebe ọ nwere ọtụtụ uru ahụike.
Ejikọtara NAD+ ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị bụ isi na -arụ ọrụ na usoro homeostasis dị iche iche na ahụ. Ọ nwere ike inye aka idobe ahụ ike, na -abawanye ndụ ndụ sel, na -enyere aka ịrụ ọrụ metabolic dị iche iche yana nyere aka n'ịgwọ ọrịa pathophysiologies dị iche iche na ahụ.
NR ntụ ntụ egosila arụmọrụ dị ka ọgwụgwọ na -arị elu n'ọrịa dị iche iche. N'ọtụtụ ọgwụ, NR nwere ike ịgwọ ọnọdụ dịka ọrịa obi, ọrịa neurodegenerative, ọrịa mọzụlụ, na nsogbu metabolic. E gosipụtakwala NR na -egbu oge ịka nká nke mkpụrụ ndụ ma gbatịkwuo ndụ ha. A na -ahụ ya na ngwaahịa nri dị ka azụ, ọkụkọ, akwa, mmiri ara, na ọka.
Iji ghọta ihe nicotinamide riboside chloride na -eme, anyị ga -ebu ụzọ ghọta nicotinamide adenine dinucleotide ma ọ bụ NAD+.
NAD+ bụ coenzyme dị mkpa na ahụ mmadụ. Ọ na -arụ ọrụ na -eduzi ụzọ metabolic dị iche iche. Ọnụnọ ya n'ime ahụ dị mkpa maka ịgwọ ọtụtụ ụdị ọrịa. Ọ na -enye aka imepụta ume maka ụbụrụ, sel na -alụso ọrịa ọgụ, na mọzụlụ.
Ọnụ ego NAD+ nke enwere ike nweta site na isi nri dị ntakịrị. Nke a ezughị maka ọtụtụ selụ nke ahụ iji. Yabụ imepụta ya, ahụ na -aga ụzọ dị iche iche. Enwere ụzọ ụzọ atọ nke enwere ike ijikọ NAD+. Ụzọ De novo njikọ, ụzọ Preiss Handler, na ụzọ nzọpụta.
Ụzọ Salvage bụ usoro a na -ejikarị eme NAD+ n'ime ahụ. N'ụzọ a, NAD+ na -enweta mmeghachi omume redox. Ọ gụnyere ịbelata nha nha elektrọn abụọ, nke ga-agbanwezi n'ụdị a na-akpọ nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Ebe ọ bụ na mgbakwunye nri anaghị ezu maka mkpa ahụ maka NAD+, ụzọ nzọpụta na -eji ma na -ejigharị NAD+ dị ugbu a na ụdị ya dị iche iche.
Otu n'ime isi ihe NAD+ na -eme bụ ịgbalite sirtuins, otu enzyme 7, Sirt1 ruo Sirt7. Enzymes ndị a nwere ọrụ nke ịchịkwa ịka nká na ogologo ndụ nke sel. Sirtuins na -arụ ọrụ n'ọtụtụ usoro metabolic, dị ka mwepụta insulin, mkpokọta nke lipids, na nzaghachi nrụgide. Ọ nwedịrị ike ịhazi ogologo ndụ. A na -arụ ọrụ Sirtuins mgbe ọkwa NAD+ bilitere.
NAD+ bụkwa mkpụrụ maka otu protein ndị akpọrọ poly ADP-ribose polymerase (PARP). Ọ bụ ya kpatara nrụzi na nkwụsi ike nke DNA na mkpụrụ ndụ ihe nketa yana ọ nwekwara ike bụrụ ọrụ maka ogologo ndụ.
Ọkwa NAD+ na -adalata n'ihi afọ na ọrịa. Ụfọdụ ihe kpatara mbelata ya bụ nfụkasị na -adịghị ala ala, ịgbalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, yana ibelata ọrụ nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), na -eduga n'ịbelata mmepụta ya. Ka ahụ mmadụ na -eto, ogo mmebi DNA na -abawanye site na obere ohere iji rụzie, na -akpata ịka nká na ọrịa kansa.
Enwere ụzọ ole na ole iji bulie ọkwa NAD+ n'ime ahụ. Ha na -eri obere nri ma na -achịkwa ọnụ ọgụgụ kalori, ibu ọnụ, na mmega ahụ. Ihe omume ndị a nwekwara ike inye aka mee ka ahụ dị mma ma na -arụkwa ọrụ.
Usoro ndị ọzọ iji mụbaa NAD+ gụnyere iri tryptophan na niacin na iwere ihe nkwalite NAD+ dị ka nicotinamide riboside chloride na nicotinamide mononucleotide.
Nicotinamide riboside chloride bụ ihe na -ebute ụzọ nke nwere ike ịbawanye ọkwa cellular nke NAD+. Ọ bụkwa isi iyi nke vitamin B3. Ọ bụ ngwaahịa na -arụ ọrụ n'ụzọ nzọpụta nke mmepụta NAD+. Ọ na -atụgharị n'ime nicotinamide mononucleotide (NMN) site n'enyemaka nke enzyme NR kinase Nrk1. Ọ tụgharịrị gaa na NAD+.
Mgbe ịnyechara NR, ọkwa NAD+ na -abawanye n'ahụ, nke a na -ekesa ya n'akụkụ dị iche iche. Ọ nweghị ike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara, mana ọ na-agbanwe ka ọ bụrụ nicotinamide nke a na-ebuga ya na ụbụrụ na akwara ndị ọzọ ebe ọ mejupụtara NAD+.
Imirikiti ozi gbasara ịdịmma nke Nicotinamide Riboside chloride sitere na nyocha anụmanụ. Nnyocha nyocha nke mmadụ ka nwere oke, ọ dịkwa nnukwu mkpa.
Uru Nicotinamide Riboside Chloride
Enwere ọtụtụ uru dị n'iji Nicotinamide Riboside Chloride. Ha bụ:
Mmetụta na Ọrịa Neuromuscular
Ike Nicotinamide riboside chloride ịbawanye NAD+ nwere ike melite ọrụ mitochondria. Nke a nwere ike inye aka n'ịgwọ ọrịa myochondrial myopathies . E gosipụtakwala ntụ ntụ NR dị irè iji melite ọrụ nke dystrophies muscular.
Mmetụta na ọrịa obi
Nsogbu ọ bụla na metabolism NAD+ nwere ike ibute nsogbu na obi na arịa ọbara. Ọ nwere ike bute ọnọdụ dịka nkụda obi, oke ibu, infarction myocardial, wdg NR mmeju nwere ike weta oke NAD + na nicotinamide adenine dinucleotide + hydrogen (NADH) ka ọ dị mma wee kwụsị nrụzigharị adịghị mma nke anụ ahụ . Ọ nwekwara ike weghachite mmetụta nke nkụda obi.
Mmetụta na ọrịa neurodegenerative
Ọrịa neurodegenerative na -emekarị na ịka nká. Ejikọtara ha na nrụgide oxidative nke nwere ike ibute DNA. Ọtụtụ mgbe, a ga -enwe omume na -adịghị mma nke mitochondria, na -eso ihe ụfọdụ mgbe mkpụrụ ndụ agaghị enwe ike ịrụ ọrụ nke ọma. NAD+ na -agbada na ego ka ahụ na -eto, na -eduga n'ịrụ ọrụ mitochondria. Nke a nwere ike ibute ọrịa neurodegenerative dị iche iche. Ọ nwekwara ike ịbawanye ohere nke ọrịa Alzheimer.
Nicotinamide Riboside chloride na -abawanye ọnụọgụ NAD+ n'ime ahụ, na -ebelata nrụgide oxidative, yana nwekwara ike mezie DNA mebiri emebi. Ọ na -enye aka n'ịgwọ ọrịa Alzheimer na ụmụ oke . Ọ nwekwara ike belata mbufụt na ụbụrụ, na -enyere aka melite cognition na ebe nchekwa . Ọ nwere ike ime nke a site na ibelata ọnụọgụ amyloid-protein protein na igbochi amyloidogenesis.
NR ntụ ntụ nwekwara ike ịkwụsị mmebi nke axons n'ụdị adịghị ala ala nke ọrịa neurodegenerative site n'ịgbanwe metabolism nke NR na axon . Mmebi nke neurons na -agagharị agagharị nke na -etinye mkpụrụ ndụ ntutu cochlear nwere ike ime mgbe ekpughere ya na oke mkpọtụ. NR egosila na ọ dị irè n'igbochi mkpọtụ ụda butere mkpọtụ. Ọ na-eme nke a site na ime ihe sirtuin ma ọ bụ SIRT3 dabere na-ebelata mmebi neurite .
Mmetụta na ndị ọrịa mamịrị
Nicotinamide ribonucleoside chloride egosila na ọ dị irè n'ibelata ihe mgbaàmà nke nsogbu metabolic dị ka ụdị ọrịa shuga nke abụọ . E gosiputara ya iji meziwanye nnabata glucose, belata ibu ma gwọọ mmebi imeju na ụmụ oke. Yabụ na ọ nwere ike ịdị irè n'ịgwọ mmadụ.
Mmetụta na ahụike imeju
E gosipụtara ọnọdụ imeju dịka ọrịa imeju abụba na -anaghị egbu egbu na -ebute ụkọ NAD+. Yabụ, ịgbakwunye ntụ ntụ NR nwere ike inye aka maka mgbake ka mma na ọnọdụ ndị a .
Mmetụta na ịka nká
A chọpụtakwara na NAD+ na -ebelata ịka nká nke mkpụrụ ndụ ma na -eme ka ha dịghachi ndụ. Achọpụtala ya ka ọ na -akwalite ọrụ sel sel nke na -enyekwa aka ibelata ịka nka .
Uru Nicotinamide Riboside Chloride karịrị ndị NAD+ ndị bu ụzọ
NR nwere bioavailability ka mma yana ọ dị nchebe iji ya ma e jiri ya tụnyere ndị bu ụzọ. E gosiputara na ọ na -abawanye ọkwa NAD+ karịa na oriri ọnụ na ụmụ oke yana na -enyekwu NAD+ na mọzụlụ ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ. Ọ nwekwara ike ịchịkwa ọkwa lipid ọbara nke ọma ma bulie ọkwa NAD+ n'ime obi .
Mmetụta dị n'akụkụ Nicotinamide Riboside Chloride
Nri ọnụ nke nicotinamide riboside chloride na obere usoro adịghị mma. Ọ nwere ike ịgụnye ụfọdụ mmetụta dị ka
Etu esi azụta Nicotinamide Riboside Chloride?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta ntụ ntụ NR, ọ kacha mma ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe Nicotinamide Riboside Chloride. Ọ na -agba mbọ hụ na ejiri ihe kachasị mma maka mmepụta, n'okpuru anya ndị ọkachamara na ngalaba metụtara ya. A na -eme ngwaahịa ndị a site na ntuziaka nchekwa siri ike nke na -ahụ na ngwaahịa a dị oke mma, yana nnukwu ike, yana kwakọbara nke ọma. Dị ka mkpa onye ọrụ si dị, enwere ike ịhazi iwu ahụ ka ọ dabaa n'ụdị ụtọ ha.
Ozugbo emere ngwaahịa a, ekwesịrị idobe ya na oyi oyi nke 0 ruo 4C maka obere oge yana -20C maka ogologo oge. Ọ bụ iji gbochie ya imebi ma ọ bụ meghachi omume na kemịkal ndị ọzọ na gburugburu.
Chi Y, Sauve AA. Nicotinamide riboside, ụdị nri na-edozi ahụ n'ime nri, bụ vitamin B3 nke nwere mmetụta metabolism ike na neuroprotection. Nlekọta Curr Opin Clin Nutr Metab. 2013 Nọvemba; 16 (6): 657-61. doi: 10.1097 / MCO.0b013e32836510c0. Nyocha. PubMed PMID: 24071780.
Bogan KL, Brenner C. Nicotinic acid, nicotinamide, na riboside nicotinamide: ntule nke mkpụrụ ndụ NAD + na-ebute vitamin na nri mmadụ. Annu Rev Nutr. 2008; 28: 115-30. doi: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. Nyocha. PubIDed PMID: 18429699.
Ghanta S, Grossmann RE, Brenner C. Mitochondrial protein acetylation dị ka sel-intrinsic, onye na-anya usoro nchekwa nchekwa abụba: kemịkal na metabolic nke mgbanwe acetyl-lysine. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2013 Nov-Dec; 48 (6): 561-74. doi: 10.3109 / 10409238.2013.838204. Nyocha. PubIDed PMID: 24050258; PubMed Central PMCID: PMC4113336.
Pyrroloquinoline Quinone jụrụ mmiri (122628-50-6)